Awwal Aloo: Komishiniin Araaraa biyya ijaara - BBC News Afaan Oromoo
Awwal Aloo: Komishiniin Araaraa biyya ijaara
Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itoophiyaa yaa'ii idileessaa 14ffaa kaleessa taa'een wiixinee seeraa komishinii Araaraa hundeessuuf dhiyaate sagalee mormii tokkoo fi callisaa tokkoon sagalee caalmaan raggaasiseera.
Barbaachisummaa komishinichaarratti miseensonni gaaffii fi yaada dhiyeessuun irratti mariyatameera.
Komishiniin kun adda durummaan dhibdee hawaasa gidduu jiru kan qoratu, akkasumas furmaatasaaf mala dhawu ta'ullee, gaaffiin barbaachisummaasaa irratti shakkii uumu ka'eera.
Innis uummata gidduu dhibdeen hin jiru, uummannis wal lolee hin beeku, kanaafuu eenyuun walitti araarsina, hawaasi duudhaa waliin jireenyaa qabawoo kan jedhu ture.
'Haasaan Ministirichi paarlaamaatti taasisan kan warra gaafate qaanesseedha'
Egeree lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqa'anii
Dhimma kanarratti yaada kan kennan Mana Maree Bakka Bu'oota Uummatatti Walitt Qabaan Koree Dhaabbii Hariiroo Biyya Alaa fi Dhimmoota Nageenyaa Obbo Tasfaayee Dhaabaa guutummaatti dhibdeen hawaasa gidduutti hin mudanne jennee ka'uuf haala nu dandeessisurra hin jirru jedhan.
Kanaaf komiishinischi komii fi gaaffii hawaasaa kutaalee biyyattii garaagaraa miidhamuu himatan maddi isaanii maal akka ta'e qorachuun araara buusee aadaa waliin jireenyaa hawaasichaa gabbisuurratti xiyyeeffatee hojjeta jedhan.
Komishiniin Araaraa Maaliif?
Waa'ee komishinii araaraa haarawa paarlaamaan Itoophiyaa raggaasisee kanarratti akka yaada nuuf kennaniif kan gaafanne Landan Yuuniversitii Keele keessatti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr.Awwal Qaasim Aloo biyyoota sirni bulchiinsaa isaanii abbaa irrummaan ibsamuu fi dhiittaan mirga namoomaa hamaan irratti raawwatamaa ture keessatti komishinii akkanaa hundeessuun araara buusanii gara fuulduratti adeemuun murteessaadha jedhan.
''Wayita mootummaa abbaa irrummaarraa gara dimokiraasiitti ce'amu mootummaan bakka badiirraa gara waan sirriitti ce'uuf mala dhawuu qaba. Badiiwwan dhiittaa mirga namaa fi kanneen biroo abbootii irreetiin raawwataman seeraan ilaaluuf sirna diriirsuu gaafata. Hojii hojjetamuu qabu keessaa tokko namoota badii balleessan haala ittiin seeratti dhiyeessaniidha. Gama biraatiin ammoo komishina akkasii hundeessuun uummanni rakkoon ture maal akka ta'e beekee karaa ifa ta'een waliin mari'atee walii dhiisee gara fuulduraa deemuu akka danda'uuf gargaara.''
Nama hunda mana murtiitti dhiyeessanii adabuuf yeroo fi qabeenyiyyuu nama daangessa kan jiran Dr. Awwal, ''Komishiniin kun dhibdeewwan adda addaa uummattoota keessatti mudataniif araarri bu'ee biyyi kun akka byyatti akka itti fuftuuf gargaara. Biyya ijaaruuf waliigaltee barbaachisa, walii galtee sanaaf ammoo komishiniin kun baayyee barbaachisaadha'' jedhan.
Deeggarsa maatii tokko, buqqaatota 1000f
Itoophiyaan biyya buqqaatota biyya keessaa hedduu qabdu jedhamte
Buqqaatonni 700,000 naannoo Somaalee keessa jiran 'deeggarsa hatattamaa fedhu'
Biyyi kun ce'umsarra jiraachuusheetiin wantoota jijjiiramuu qaban hedduudha kan jedhan Dr, Awwal Aloo, ce'umsa kana keessatti haqa mirkaneessuuf hojiin hojjetamu isa tokkoodha jedhan.
''Badii kanaan dura dalagameen waljibbiinsa uummata gidduutti uumamee jira. Kanaafuu waljibbiinsa uumame ,shakkii uummata keessa bu'e sana haala sirrii ta'een sakatta'amee faayillisaa cufamee gara fuulduraatti hin tarkaanfatamu yoo ta'e boris isumatti deebi'ama. Jijjiirama kana milkeessuuf hojii mootummaan hojjete keessaa Komishinii Araaraa mootummaan hundeessee irratti hojjetaa jiru tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran keessaa tokko malee qofaasaa rakkoo amma jiru hiiku ykn biyyattii gara fuulduraatti ceesisu jechuu miti''
Rakkoon qaamoleen tikaa fi qondaaltonni mootummaa duraan turan uumaniin walshakkii fi waljibbiinsi uummattoota gidduutti uumame olaantummaa seeraa kabachiisuun furama jedhan Dr.Awwal.
Dimokiraasii ijaaruu keessatti rakkoon seera malummaa akka saaxilamu ni hubatama, kanarratti mootummaan jabaatee hojjechuu qaba. Tarkaanfii amma eegalame baayyeellee gargaaruu baatu ministirri nagaa kan amma bifa haaraadhaan hundeeffame nageenya buusuu keessatti ga'ee guddaa qaba.''
Paarlaamaa: Komishiniin daangaa maaf barbaachise? Aangoofi kaayyoonsaa hoo?
Egereen lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqa'an maali?
Poolisii Oromiyaa: Ajjeechaa Buraayyuutiin namoonni 23 lubbuu dhaban
17 Fuulbaana 2018
Lakkoofsi jeettii waraanaa Chaayinaa qilleensa Taayiwaaniirra marsanii dabaluun gaaffii kaase